Home dị iche iche Onyinye nka na ụzụ RC thermal na-efe efe n'ụgbọ elu ụdị - mmeghe na nnabata
Video gara aga MODELLPILOT.EU - AKW THEKWỌ ELLỌ N'TERLỌ NCHE (TRAILER 2014)
Video nke ozo BIG RC CONCORDE Michael Breuer Part 1 JETS KWES CR C COLOGNE JETMEETING MFG PORZ 2008
BIG RC CONCORDE Michael Breuer Part 1 JETS KWES CR C COLOGNE JETMEETING MFG PORZ 2008
30. November 2020 - LUD: 5. December 2020
10. November 2020 - LUD: 18. December 2020
5. August 2020 - LUD: 18. December 2020
Quintus 8,85 m - cranking the thermals - na-abanye na thermals n'akụkụ ala, overflight, looping, vario
2. August 2020 - LUD: 18. December 2020
13. July 2020 - LUD: 18. December 2020
Nlereanya ụgbọ elu ụgbọ elu
10. October 2016 - LUD: 17. November 2020
RC thermal na-efe efe n'ụgbọ elu ihe atụ - ụbọchị ga-amalite site na nkwupụta mbụ
20. October 2016 - LUD: 17. November 2020
RC thermal na-efe efe n'ụgbọ elu ihe atụ - enyemaka ala na ihe ndị nwere ike ịkpalite
RC okpomọkụ na-efe efe n'ụgbọ elu ihe atụ - ikuku afụ na-asọga na nkewa
RC okpomọkụ na-efe efe n'ụgbọ elu ihe atụ - "Chee" mpaghara ọkụ ahụ site na ije ije echiche
RC thermal na-efe efe n'ụgbọ elu ụgbọ elu - ije ije - na-achọpụta ihe ịrịba ama nke ọma
RC okpomọkụ na-efe efe n'ụgbọ elu ihe atụ - nweta mmetụta maka ikuku mgbe niile
RC thermal na-efe efe n'ụgbọ elu ụdị - lelee ndị ọkwọ ụgbọ elu gị, ị na-arịgo ugbua?
RC okpomọkụ na-efe efe n'ụgbọ elu ihe atụ - mmegharị na ikuku Ngosipụta: ahịhịa ahịhịa, anwụnta na epupụta
RC thermal na-efe efe n'ụgbọ elu ihe atụ - lelee ájá, wepụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge kwesịrị ekwesị
RC thermal na-efe efe n'ụgbọ elu ihe atụ - ihe nzuzo nke udo
RC thermal na-efe efe n'ụgbọ elu ụgbọ elu - A pụrụ ịchọta ifufe siri ike na ... udo dị jụụ
RC thermal na-efe efe n'ụgbọ elu ihe atụ - ihe ngosi ikuku na-ezo aka n'ajị agba / mmelite
RC thermal na-efe efe n'ụgbọ elu ihe atụ - igwe ojii na-efe efe ma bepụ
RC okpomọkụ na-efe efe n'ụgbọ elu ihe atụ - Fụpụ isi nkewa nke dị jụụ na ala
7. September 2019 - LUD: 25. December 2020
RC thermal na-efe efe n'ụdị efe efe - bido nwayọ ma chọọ
RC thermal na-efe efe n'ụdị efe efe - bido ikuku ụgbọ elu na-amata na-efe efe
RC thermal na-efe efe n'ụdị efe efe - mkpọda na-efe efe na okike
RC thermal na-efe efe n'ụgbọ elu ụgbọ elu - ụgbọ elu nke nwere mita 6 nke jupụtara na fiberglass-cfk
[Mkpokọta: 21 Nkezi: 5/ 5]
Edemede vidiyo vidiyo na RC thermal na-efe efe n'ụgbọ elu ụdị. Ghọta, chọta na etiti ọkụ. Na ịgba ọsọ, na-arị elu na onye ọkwọ ụgbọ mmiri. Na ihe nkiri ụgbọ elu nke ihe nkiri RC na ihe nkedo nke RC a kọwara etu esi amata ọkụ tupu ịmalite ebe nkwụsị, họrọ oge kwesịrị ekwesị, chọta afụ ọnụ, wee gbasaa ngwa ngwa, gbagoo nke ọma iji wee nwee ike ịgbapụ anya.
Iju Fokker EI nke Tilmann Mahkorn wuru - Ewube: Paolo Severin
Gịnị mere ụgbọ elu eji eme ihe atụ na-efe? - Rudder utịp na profaịlụ na mmetụta. Oge na-adịghị mma na-atụgharị.
Tags Mbidoajị agban'isiNkọwantinye aka oruchọtaofufegpshilfeModel na-efe efeFlightgbọ elu ụgbọ eluOnyeka OnwenunaturomumeRCụdị gliderreviewsnkwupụtaThermikKwes na-efe efeVideoetiti
MODELLPILOT.EU - AKW THEKWỌ ELLỌ N'TERLỌ NCHE (TRAILER 2014)